Robocalls- Tsy halahelo azy ireo izahay! | Martech Zone
Mahazo azy rehetra isika, ary saika mankahala azy rehetra, ny antso manelingelina mampiroborobo ny vokatra na hetsika sasany izay mitendry rakipeo na, ny mbola ratsy kokoa aza, dia miteny aminao amin'ny feo mekanika. Eny, nametraka lalàna sy fitsipika vaovao momba ny fametrahana ireo antso ireo ny FTC.
Jon Leibowitz, filohan'ny FTC, dia nanana teny somary henjana momba io lohahevitra io.
Ny mpanjifa amerikanina dia nanazava mazava fa zavatra vitsy no mahasosotra azy ireo mihoatra ny miliara robocalls fivarotana telemarketing azony isan-taona.
Manomboka amin'ny 1 septambra, ity fanapoahana baomba efa voatonona mialoha ity, fangatahana tsy misy dikany ary marketing ratsy ho tsy ara-dalàna. Raha mieritreritra ny mpanjifa fa iharan'ny herisetra ataon'ny mpandroba izy ireo dia mila mampahafantatra anay izy ireo ary hanenjika azy ireo izahay.?
Toa ity ny lalàna henjana indrindra momba ny karazana varotra ankehitriny, saingy misy ny fampitandremana mamela ireo vondrona sasany hanohy hampiasa ity haitao ity. Ny ankamaroan'ireo dia manodidina ny fampahalalana vs. hafatra fampiroboroboana.
Ny hevi-dehibe amin'ny ankapobeny dia raha miantso ianao hilaza fa nofoanana ny lalao baolina kitra Johnny dia tsy maninona, fa raha miantso hampahafantatra ahy ny tolotra vaovao mahafinaritra azonao ianao dia mety ho sahirana amin'ny $ 16k isaky ny antso raha tsy hoe mahazo alalana an-tsoratra avy amiko. Mety hampiditra sazy maranitra tena izy izany raha toa ka mampiasa an'ity karazana haitao fampitana ity ny orinasanao.
Jereo ny fanambaràna FTC manome sy mijery topimaso, na jereo ny fitsipi-pitsipika farany pdf.
Tags: antso mandeha ho azyftcantso an-telefaonarobocallstelemarketing